Yaa Guddoominaya Shirka Madaxda ee Maanta ka furmaya Muqdisho? | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Yaa Guddoominaya Shirka Madaxda ee Maanta ka furmaya Muqdisho?
Yaa Guddoominaya Shirka Madaxda ee Maanta ka furmaya Muqdisho?
Shirka Wadatashiga Qaran ee Madaxda dowladda Federaalka Soomaaliya, kuwa maamul Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ayaa Maanta oo sabti ah waxaa lagu wadaa inuu si rasmi ah uga furmo Magaalada Muqdisho ee Caasimadda dalka.
Afhayeenka Xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Ibraahim Macalimuu oo Qoraal soo saaray ayaa waxaa uu ku sheegay in Shirka Madaxda uu Maanta ka dhici doono Teendhada Afisyooni ee xeyndaabka Xalane.
Waxaa uu sheegay Macalimuu inay soo xaadireen Madaxda ka qeyb galeysa Shirka, isla markaan haatan la sugayo oo kaliya Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe oo goor dhow kasoo degaya Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde.
Sidoo kale Macalimuu ayaa tilmaamay in Shirka uu guddoomin doono Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, waxaana ka qeyb galaya Madaxda Dowladda iyo kuwa maamulada Jubbaland, Puntland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle.
“Shirka waxaa shir guddoomin doono Ra’isul Wasaare Mohamed Hussein Roble waxa uuna ka dhacayaa Afisyoone oo ah halkii ay caadiyan ka dhacayeen kulamadii u dambeeyay” ayuu yiri Maxamed Ibraahim Macalimuu.
Shirkaan ayaa waxaa looga hadli doonaa dhameystirka heshiiskii 17-kii Sep iyo xalinta khilaafka ka taagan qabsoomida doorashada dalka ka dhaceysa oo Madaxda aysan weli heshiis rasmi ah ka gaarin.
Maqaal horeNin Weerar ku ahaa Imaamka Masjidka Xaramka oo la qabtay
Maqaal XigaShirka Madaxda ee Doorashada dalka oo Goor dhow furmay